ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ သို့တက်ရောက် | Pyithu Hluttaw
(၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို DONCHAN PALACE HOTEL ၌ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ၀၉၀၀ နာရီအချိန်တွင် လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများက AIPA တေးသီချင်းများသီဆို၍ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ASEAN INTER PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mme Pany YATHOTOU က အဖွင့် မိန့်ခွန်း ပြောကြားပြီး ထို့နောက် လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Thongsing THAMMAVONG က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားသည်။
၎င်းနောက် တက်ရောက်လာသော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များက မိန့်ခွန်း ပြောကြားကြသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက က ပြောကြားရာတွင် ယနေ့ကျင်းပသည့် (၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံတွင် ဂုဏ်သရေရှိ အာဆီယံပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များနှင့်အတူ တက်ရောက်ရသည့်အတွက် များစွာဝမ်းမြောက်မိ ပါကြောင်း။
ဆင်ပေါင်းတစ်သန်း၏နေရာဒေသဟု တင်စားခေါ်ဆိုသည့် လာအိုနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီး ချင်းကောင်းဆက်ဆံရေးရှိသောကြောင့် မိမိတို့သည် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာကို ရောက်ရှိနေ သကဲ့သို့ ခံစားမိပါကြောင်း၊ ပျူငှာဖော်ရွေစွာ ဧည့်ဝတ်ကျေမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားလိုပါကြောင်း။
လာအိုနိုင်ငံက အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အတွက် များစွာတန်ဖိုးထားပါကြောင်း၊ လာအိုအမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မဒမ်ပန်နီရာသိုတူး၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလို ပါကြောင်း။
မိမိတို့ ယခုကဲ့သို့ စုဝေးလာရောက်ကြခြင်းသည် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း တစ်ရပ်ကို အချိန်မီ ထူထောင်သွားဖို့ သံန္နိဋ္ဌာန်ချထားကြတာကို ထပ်လောင်းအတည်ပြု ကြဖို့ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ယခုကျင်းပသည့် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံမှာ “ အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ထူထောင်ဖို့၊ ပါလီမန် အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ကြပါစို့” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ် နှင့်အညီ ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်များ (၈၀)ရာခိုင်နှုန်း အကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖြစ်သော်လည်း အားရကျေနပ်မနေသင့်ပါ။ ကျန်ရှိနေသေးသော ရည်မှန်းချက်များ အချိန်မီပြီးမြောက်စေရန်အတွက် အာဆီယံနိုင်ငံများ အချင်းချင်းသာမက ဆွေးနွေးဖက်များနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုမြှင့်တင် သင့်ပါကြောင်း၊ အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံတွင် လေ့လာသူဆွေးနွေးဖက်များ ပိုမိုများပြား လာသည့်အပြင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံမှုများ တိုးတက် လာသည်မှာ မှတ်သား ထိုက်ပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံသည် “ရှေ့သို့တူညီ တက်လှမ်းချီ၊ ငြိမ်းချမ်းဝေစည် အာဆီယံ အသိုက်အဝန်းဆီ” ဆိုသည့်ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်နှင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း တစ်ရပ်ထူထောင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံကများစွာ အလေးထားပါကြောင်း၊ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတစ်ရပ်၏ မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်ဖြစ်သည့် အာဆီယံနိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်း၊ အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းနှင့် အာဆီယံလူမှုယဉ်ကျေးမှု အသိုက်အဝန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဝေးပေါင်း များစွာကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပလျက် ရှိပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့်မေလအတွင်းက ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါကြောင်း၊ ယင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် အာဆီယံနှင့် အာဆီယံ ပါလီမန်များညီလာခံတို့အကြား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများ အစီအစဉ်တကျ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်သွားရန် အကြံပြုခဲ့ကြပါကြောင်း။
သြဂုတ်လအတွင်းက ကျင်းပခဲ့သော အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် ဆွေးနွေးဖက်များနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများမှာလည်း အောင်မြင်မှု များ ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိတို့သည် အချင်းချင်းနားလည်စာနာခြင်းနှင့် တူညီသော တန်ဖိုး ထားမှုနှင့် စံနှုန်းများကို မျှဝေခြင်းစသည့် ထူးခြားမှုရှိသော ယဉ်ကျေးမှုကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်လျင် မဝေးတော့သည့်အနာဂါတ်တွင် ငြိမ်းချမ်းသာယာဝ ပြောသော အသိုက်အဝန်းတွင် နေထိုင်နိုင်ကြမယ်လို့ အလေးအနက် ယုံကြည်ပါကြောင်း။
အာဆီယံနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများစွာရှိသည့်အနက် အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံသည် အရေးအကြီးဆုံးအစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း။
အခါအခွင့်သင့်ခိုက် ညီလာခံကို အသိပေးလိုသည်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်များ၏ (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးများကို စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က စတင်ကျင်းပလျက်ရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သင့်လျော်မှုရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်များ လေ့လာခြင်းအစရှိသည့် အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးမည့် အစီအစဉ် များရှိပါကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စရပ်များကိုတင်ပြနိုင်ဖို့ လွှတ်တော်အထူးကော်မတီ အစည်းအဝေး များကျင်းပလျက် ရှိပါကြောင်း။
မြန်မာလွှတ်တော်အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး သည့် လှုပ်ရှားမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ “ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး လူငယ် များ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေး ” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ကို စက်တင်ဘာလ( ၁၅ )ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသွားခဲ့ပါကြောင်း။
မိမိတို့မျှော်လင့်ထားသလောက် မရရှိသေးသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၅၀)အတွင်း နှိုင်းစာလျင် ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးနျင့် အခွင့်အလမ်းများကို ယနေ့ တွင် အရရှိဆုံးအချိန် ဖြစ်ပါကြောင်း။
မြန်မာလွှတ်တော်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အများက သုံးသပ် ပြောဆိုကြပါကြောင်း။
အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်သူများနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မြန်မာ လွှတ်တော် များက မဖြစ်မနေ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
ထိုသို့ဆာင်ရွက်ရာမှာ အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ(အိုင်ပါ) ကလည်း မိမိတို့ အပေါ်နားလည်ပြီး ဆက်လက်အားပေးကူညီမှုများ လိုလားပါကြောင်းကို ပြောကြားလိုပါ ကြောင်း။
အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးက ယမန်နှစ် အထွေထွေ ညီလာခံမှာတင်သွင်းခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံ၏ လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ပေါင်းများစွာက လုပ်ငန်းများအပြင် အနာဂါတ်အတွက် စီမံကိန်း များပါ ပါရှိကြောင်း သိရှိရသည့်အတွက် အားတက်မိပါကြောင်း၊ အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံ ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်ရန် မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းနေကြသော အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် အဖွဲ့အား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရမှာဖြစ်ပါကြောင်း။
အထွေထွေညီလာခံ အဆက်ဆက်က ယခုအချိန်အထိ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အမျိုးသမီးလွှတ်တော်အမတ်များဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော် ချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသား လွှတ်တော်များက အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံ ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအတွင်းရေးမှူးရုံးများကို အကူအညီပေးမည့် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေသွားဖို့ လိုအပ်လျက်ရှိပါကြောင်း။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းက နေပြည်တော်မှာ ဂျီအိုင်ဇက်၊ ဟန်းဆိုင်ဒယ်တို့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ပါလီမန် ဘတ်ဂျက်နှင့် ထင်သာမြင်သာရှိမှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပေးသည့်အတွက် အာဆီယံ ပါလီမန်များညီလာခံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါကြောင်း။
အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ထူထောင်ရေးတွင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် အာဆီယံ ပါလီမန်များညီလာခံနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြည်သူအများသိရှိလာစေရန်အတွက် အသိပေးရေးကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဂျာမနီနိုင်ငံ အစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ ကြောင်း၊ အာဆီယံ ပါလီမန်များ ညီလာခံလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာရန်အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါရန် အခြားသော ဆွေးနွေးဖက်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို တိုက်တွန်း အပ်ပါကြောင်း။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ထူးခြားကောင်းမွန်သော အစီအစဉ်များအတွက် အဆွေတော် အား ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ညီလာခံမှ ကောင်းမွန်သောရလဒ်များ ရရှိ အောင်မြင်စေရန် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ၀၈၃၀ နာရီချိန်တွင် DONCHAN PALACE HOTEL ၌ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ASEAN INTER PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mme Pany YATHOTOU မှ အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံသို့ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ရောက်ရှိနေသော အာဆီယံနိုင်ငံများမှ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ လေ့လာသူ နိုင်ငံများမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအား တွေ့ဆုံသည့်အခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်သည်။
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ၁၁၀၀ နာရီချိန်တွင် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိသော ပထမစုံညီအစည်းအဝေးသို့ အခြားနိုင်ငံများမှ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ တက်ရောက်သည်။